Home News Ma Ogtahay in Dowlada Kenya ay ku Qancineeyso Farmaajo Muranka Badda In...
Ma Ogtahay in Dowlada Kenya ay ku Qancineeyso Farmaajo Muranka Badda In Wada-xaajood lagu dhameeyo!!
Saacaddihii lasoo dhaafay ayaa waxaa soo ifbaxday in dowladda Soomaaliya ay dowladda Kenya ay la bilowday Wadahadal ku saabsan Muranka Badda ee ka dhaxeeya Labada dal.
Markii hore dowladda Kenya ayaa dhowr jeer ku dhawaaqday in ay doonayso in aan Maxkamad la aadin oo wada hadal hoose lagu dhameeyo Khilaafka Labada dal,laakiin dowladda Soomaaliya ayaa arintaasi ka biyadiiday oo Dacwad ka dhan ah dowladda Kenya geysay Maxkamadda Caalamiga ah ee ICJ.
Mas’uuliyiin ka tirsan dowladda Kenya ayaa hadda sheegay in dowladda Soomaaliya ay ogolaatay wadahadal,islamarkaana hadda uu jiro wadahadal u socda Labadda dal.
Wasiirka arrimaha dibadda Dalka Kenya , Monica Juma,ayaa sheegtay in wadahadalka lagu xallinayo muranka dhinaca Badda ah ee u dhaxeeya Kenya iyo Soomaaliya uu yahay mid socda,islamarkaana maraya meel wanaagsan.
Monica Juma Waxaa ay sheegtay wahadalka labada dal uu ka muhiimsanyahay Maxkamadda ICJ ,ayna suurtagal tahay in lasoo Afjaro Muranka Labada dal ee badda ka dhashay.
“ Soomaaliya iyo Kenya waa dalal walaalo ah,deris ah isuna dhow,sidaas darteed iyaga ayey ku wanaagsan tahay in ay dhameystaan waxa u dhaxeeya iyada oo aysan ku dhex jirin gacan saddexaad” ayay tiri Wasiirka Arrimaha dibadda Kenya.